“Dhawaan waxaan Bilaabaynaa wado laba kiilomitir ah , kana bilaabmaysa magaalada Borama afaafkeeda Hore” By: Gud: Hay’ada horumarinta wadooyinka Awdal/Salal Pro:Xasan Cali Cismaan+Dhagaysi+Sawiro « SAWNEWS NETWORK
« Madaxwaynaha S/land Daahir Rayaale Oo Galabta Borama Soo Gaadhay
Marxuum Maxamed Xassan Mataan Oo Maanta Si Heer Qaran ah Loogu Aasay Boorama »
“Dhawaan waxaan Bilaabaynaa wado laba kiilomitir ah , kana bilaabmaysa magaalada Borama afaafkeeda Hore” By: Gud: Hay’ada horumarinta wadooyinka Awdal/Salal Pro:Xasan Cali Cismaan+Dhagaysi+Sawiro
Posted by Sawnews.tk on March 28, 2010
Borama(Sawnews) dhawaan ayay ahayd, markii loo magacaabay, urrukii horey loo odhan jiray ARNA, iminkase lamagac baxay ASARDA, Pro:Xasan Cali Cismaan.Gudoomiyaha ayaan maanta ku booqanay, xafiiskiisa ku yaala magaalada Borama.waxa aanan la yeelanay waraysi dhinacyo badan taabanaya, kaas oo inta badan, khuseeya wadooyinka goboladan ,Awdal iyo Salal.hadaba inta aanan waraysiga la yeelan, ayaan waxaan idiin soo bandhigaynaa, Gudoomiyaha Cusub taariikh nololeedkiisii oo kooban.
Pro: Xasan Cali Cismaan ayaa waxa uu ku dhashay degmada Borama 1954, 1972,waxbarashadiisa Hoose/Dhexe, waxa uu ku dhamaystay magaalada Borama. 1976,waxbarashadiisii sarena waxa uu ku dhamaystay,magaalada Muqdisho. Proffesorku waxa uu waxbarashadiisii jaamacadeed, ee ugu horeysay ka galay jaamacadii hore ee qarankii soomaliyeed ee la odhan jirayLAFOOLE, waxa uuna jaamacadaa dhameeyay1981,waxa uuna ka qaatay shahaadada BS.
Sidoo kale waxa uu waxarasho dibadeed ugu baxay, wadanka England, taas oo uu magaalada stocholm ee edenburah, jaamacad ku taala halkaas ka galay.waxa uuna jaamacadaa soo dhameeyay 1987, waxa uuna ku soo qaatay , shahaadada Masterka, ee luqadaha ah.
Isla waqtigii uu dhamaystay aqoontaa, ayaa waxa uu u soo jarmaaday dalka libiya caasimadeeda tiribuli, waxa uuna halkaas ka noqday Proffesor Assistant, jaamacad ku taala oo magaceeda la yidhaahdo, HOON 1989-1991.
1991-2007Sidoo kale pro: waxa uu wax ka dhigayay, jaamacad la yidhaahdo, King Faysal University, oo ku taala Damaam, ee dalka sacuudiga.
2007-2009 ayuu sidoo kale ka ahaa Macallin wax ka dhiga jaamacad la yidhaahdo, King Saud University oo ku taala, caasimada dalka Sacuudiga ee riyaad.
2009-2010 ayaa waxa uu ka ahaa Jaamici wax ka dhiga, jaamacad dadka shaqaalaha ah tababarta, oo ku taala Bariga Sacuudiga ee damaam.
Intaasi waxa ay ahayd Taariikhnololeedkiisii oo kooban pro:Xasan Cali Cismaan.
Sidoo kale waxa uu shaqooyin kala duwan ka soo qabtay , wasaaradii waxbarashada horeee soomaaliaya,qaybaheeda kala duwan, sida manaahijta,iyo wasaarada warfaafinta oo ka ahaan jiray, Saddex sano.
Iminkana waxaan halkan idiinka soo jeedinaynaa waraysigiisii qaybo ka mid ah.
Waxa uu waraysigiisa ku sheegay in uu aad iyo aad u faraxsan yahay, inaan u taaganahay inaan wax uqabto dadkayga iyo dalkayga , oo aan dantaydii gaar ahaaneed uga tago, sidii aan dadkayga wax uga qaban lahaa ayuu yidhi.
Ururkan ASARDA markiisii hore waxa uu ahaan jiray, ARNA waxna lama badaline markii uu gobolku u kala baxay laba gobol lagu daray Salal, halkuu ka ahaa, Awdal oo qudha ayaa iminka uu noqonayaa , AWDAL/SALAl, waxa uuna yidhi wax kale oo faraqa oo udhaxeeyaana majirto.waxa kale oo uu sheegay ,walaalihii ka shaqayn jiray,sidoodii ayay uwada joogaan, oo uu ugu horeeyo walaalkay C/qaadir Adam Nour, uu runtii juhdi badan galiayay, illaahay ha ka abaal mariyee.waxa kale oo uu yidhi , ururkan waxa uu utaagan yaahy sidaad hore u maqasheen, inuu wax ka qabto Gobolada Awdal iyo Salal, runtii hadaan lala iman niyad iyo laabla kac lala imana, waxba ma socon karayaan, wax niyad aan ahayn oo yaalanaa ma jiro,niyad wax ka waynina ma jiraan ayaan aamin sanahay ayuu yidhi.waxaanan ku rajo waynahay inuu dariiqaasi horey u dhamaado, iyaga oo ay dadku tabarucayaan,una heelan yihiin, bishaarooyiin aad u wanaagsan , oo ka farxinayaana ay ka muuqdaan iminka inuu dariiqaasi mudo gaaban ku dhismayo, insha allah. Waxa kale oo uu sheegay, in dalkeenu ubaahan yahay, horukac, oo loo hogaamiyo khayrka, insha allahna waxaan isku dayaynaa inaan u hogaamino khayrka.
Insha allahna waan ku guulaysan doonaa, sidii aan barnaamujyadii horeba , ee maanta halkan kuwa lagu faani karo ka mid ah,oo ay ka mid tahay jaamacada Cammuud,aan ugu guulaysanay.inaan dariiqaana maanta aan ugu guulaysan doono, haduu alleh Idmo.
Sidoo kale waxa uu sheegay in xubnaha ururkan ka mid ihi, ay dhan yihiin 20qof.
Laakiin waxa joogta ah 10xubnood, inta kalena wixii go’aana uunbay nagala soo qaybgashaa ayuu yidhi.
Hadaba waraysigaas oo dheeraa , oo aan idiinku soo koobi kari waynay qoraal, waxaad ka dhagasan kartaa qaybtan hoose ee dhagaysiga.
Fadlan Riix si aad u dhagaysatid. Halkan Ka Dhagayso Click Here
This entry was posted on March 28, 2010 at 11:57 am	and is filed under News (Warka).